“सुहागरात”को बारेमा यसो भन्छन “महिलाहरु” !
सुहागरात अर्थात विवाहको पहिलो रात, जसलाई बोलीचालीको भाषामा सुहाग रात पनि भनिन्छ । जसको मतलव गुवावले सजिएको विस्तरा तथा नवविवाहित जोडीबीचको शारीरिक सम्पर्क मात्रै हुँदैन । यसको अतिरिक्त अरु पनि धेरै हुन्छ सुहाग रातमा, जसलाई केही हिन्दु महिलाले यसरी वर्णन गरेका छन् ।
यो स्थिति मेरा लागि अजीब प्रकारको थियो । किनकी मेरा पति आफ्ना अभिभावकसँग रहन्थे, र हामीले हाम्रो सुहाग रात उनको घरमा मनाउनु पर्यो । दुर्भाग्यवस हाम्रो बेडरुम पनि मेरा
पतिका आमा–बुवाको कोठासँगै जोडिएको थियो । सुहागरातको विषयमा हामी दुवैजना एक्साइटेड थियौं । यसको बावदूज हामीले आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो । किनभने मलाई डर थियो कि कतै मेरा सासु–ससुरा ब्यूँझिने पो हुन कि ?
हाम्रो लामो रिलेशनसिप थियो । यद्यपि विवाहको बेला मैले मेरो पतिलाई ६ महिनापछि देख्दै थिए । हामी दुवैजना धेरै एक्साइटेड थियौं र दिन सकिएर हुने रातिको ब्यग्र प्रतिक्षामा थियौं । आखिरमा हामीलाई एक एकान्त मिल्यो पनि, जसको हामी प्रतिक्षामा थियौं ।
हामी एकदोस्रोको नजिक आयौं र फोर–प्ले सुरु भयो । त्यतिबेलै मेले देखे कि मेरो पतिको अनुहारमा सरम (लाज) भरिएको थियो । मैले केही पनि बुझ्न सकिन । सायदै धेरै एक्साइटेड भएर होला शारीरिक सम्पर्क हुनु अगाडि नै मेरो पतिको शीघ्रपतन भयो ।
मेरो पति र मेरो यो दोस्रो विवाह थियो । हाम्रा बच्चाहरु पनि सेटल भइसकेका थिए । उनीहरुले नै एक होटेलमा हाम्रा लागि रुम बुक गरेका थिए, ताकि हामी एकसाथ एकान्तमा केही समय विताउन सकौं । पहिले त मलाई धेरै अप्ठेरो लागेको थियो । तर
जब मलाई मेरा श्रीमानले आफूलाई मनपर्ने फिल्म ‘गन विथ द वाइन्ड’को सिडि दिए, म धेरै खुसी भए । किनकी त्यो फिल्म मलाई पनि धेरै मन पर्थ्यो । हामी दुईटैले रातभरि स्कार्लेट र रेट बटलरको प्रेममा इन्जोइ गर्यौं ।
हामी दुवैजना भर्जिन थियौं । यौन सम्पर्कको विषयलाई लिएर मेरो पतिको दिमागमा धेरै आइडिया रहेछन् । तर मेरो दिमाग खाली थियो । हामी दुईटै कम उमेरका थियौं । हामीलाई थाहा थिएन कि के गर्नु पर्छ भनेर । यद्यपि सेक्स हामी दुईटैको दिमागमा थियो । तर
यसलाई कसरी सुरु गर्ने भनेर हामीलाई केही थाहा थिएन । यस्तै डरका बीच सेक्स गर्न सुरु त गर्यौं तर बीचमै रोक्नु पर्यो । पीडाका कारण म कराउन थालेपछि मेरा पति डराए । त्यसपछि हामीले त्यो रातै केही नगरी वितायौं ।